Amanye ama-Common Sewage Treatment Technologies kuzindaba ze China-Industry-Shenzhen SH-MBR Technology Co., Ltd.
Obunye Ubuchwepheshe Bemithi Yokwelashwa Kwezilwane Ezivamile eTshayina
Isikhathi: 2020-06-21 Hits: 24
Ubuchwepheshe obusebenzayo be-sludge
Ubuchwepheshe obusetshenzisiwe be-sludge buyindlela yemvelo edlula umoya emanzini angcolile ukuze iguqule ama-microorganisms we-aerobic abe yi-activated sludge enamandla e-adsorption. Indlela yemvelo iye yaba yindlela esezingeni eliphakeme lendlela yobuchwepheshe bokwelashwa kwendle.
Kunezinhlobo eziningi zobuchwepheshe obusetshenzisiwe be-sludge, kufaka phakathi indlela ejwayelekile yokusebenza kwe-sludge, indlela ye-oxidation ditch, indlela ye-XNUMX-phase activated sludge indlela, ukulandelana kwe-batch activated sludge (SBR), indlela exutshwe ngokuphelele ye-sludge, njll.
Amathangi we-biogas wokuhlanza izindlu zasekhaya
Uhlobo olusha lwethangi lokuhlanza i-anaerobic yokuhlanza (noma ithangi lokuhlanza indle yasemadolobheni) luyithuluzi elincane elisetshenziselwe ukwelashwa kwendle.
Umshini wokugaya i-biogas wokuhlanza indle yasendlini uthuthuka ngesisekelo samathangi we-septic kanye nokugaya i-biogas, okuxazulula ukungahambi kahle kokungaphatheki kahle komphumela wamathangi e-septic, inani elikhulu le-sludge efakiwe, kanye nezinga eliphansi lokubuyiselwa kwe-biogas.
Ubuchwepheshe beBiomembrane luhlobo lobuchwepheshe bokulapha okwenziwe ngobuciko obusetshenziswa kakhulu ekwelashweni kokukhucululwa kwendle kwasekhaya, kubandakanya i-anaerobic ne-aerobic biofilms.
Ama-biorganic e-Anaerobic noma aerobic anamathela ebusweni besithwali futhi akha i-biofilm ku-adsorb futhi ancekise ukungcola emanzini okuhambisa indle ukufezekisa izinhloso zokuhlanza.
Le ndlela inemishini elula, izindleko eziphansi zokusebenzisa kanye nokusebenza okuphezulu kokusebenza
Njengamanje, ubuchwepheshe obusha be-biofilm kanye nobuchwepheshe obusebenza ngobunyoninco nawo butadishwe kakhulu. Ubuchwepheshe be-MBR (Membrane Bioreactor) bungenye yazo.
Inqubo ehlanganisiwe ye-MBR
Inqubo yendabuko ethuthukisiwe ehlanganisa inqubo ye-sludge esetshenzisiwe kanye nohlelo lokuhlukaniswa kwe-membrane oluhlanganisiwe. Inqubo yokuhlukanisa uketshezi oluqinile isebenzisa amamojula we-membrane ithatha indawo yenqubo yendabuko yokulinganisa futhi ingasusa kahle u-solids Misa izinhlayiya nezinhlayiya ze-organic ukulungiselela amanzi angaboli.
I-effluent yesistimu ingasetshenziswa ngokuqondile ekukhiqizeni noma ekusetshenzisweni kabusha kwempilo. Lobu buchwepheshe bulungele izikhungo zokwelapha indle ezifuna ukusetshenziswa kabusha noma ukusetshenziswa komhlaba okuqinile, ngesilinganiso sokulashwa ngamathani ayi-1 kuye kwangama-500 / ngosuku.
Okwedlule: Mayelana ne-COD, i-BOD
Okulandelayo: Izinhlayiya ze-Colloidal, okungekho lula ukuzixazulula ngokwemvelo emanzini amdaka.